Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Leonardo Spinazzola Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Leonardo Spinazzola Biography na -egosi akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, ezinaụlọ, ụdị ndụ ya, nne na nna, nwunye (Miriam Sette), uru net, na ndụ onwe onye.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na -ewetara gị njem ndụ azụ azụ, site na mmalite ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị, nke a bụ oge ọ bụ nwata ruo na ebe ngosipụta okenye - nchịkọta zuru oke nke Leonardo Spinazzola Bio.
Nchịkọta akụkọ ndụ nke Spinazzola. Lee akụkọ ndụ ya na ebili.
Ee, onye ọ bụla maara maka ume ya, ọsọ ụwa na ọmarịcha dribbling nke na-eme ka ọ bụrụ nnukwu aka ekpe. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụla ihe ncheta ya nkenke, nke na -atọ ụtọ nke ukwuu. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Leonardo Spinazzola nwata:
Malite, ọ na -ebu aha otutu 'Leo'. Leonardo Spinazzola mụrụ na ụbọchị 25th nke Mach 1993 nye nna ya na nne ya, Simonetta, na Foligno, Italy. Ọ bụ ọdụdụ nwa nke ụmụaka 3 amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya na ya na ụmụnne ya nwanyị nọ n'okpuru.
Foto tụfuru obere Leonardo na nna ya, nne ya na ụmụnne ya ndị nwanyị.
Site n'oge ọ dị obere, onye Ịtali nwere mmasị n'ịkụ bọl. Ọ bụ egwuregwu kacha amasị ya, ọ hapụghịkwa ohere ọ bụla igwu egwuregwu ma ọ bụ abụọ. N'ezie, ewezuga njem egwuregwu bọọlụ ya, Leo nwere ọmarịcha nwata.
O nweghị ihe kpatara ịnọ naanị ya ma ọ bụ ike ọgwụgwụ, n'ihi na ọ bụ ebe ezinụlọ ya na -elebara anya. N'ezie, ịbụ nwa ikpeazụ nke ezinụlọ ya bịara baa uru, ebe ọ nwetara ịhụnanya dị ukwuu n'aka onye ọ bụla.
N'ụzọ na -akpali mmasị, nne na nna ya na ụmụnne ya ndị okenye zụlitere Leonardo. Ikekwe ị maghị na ụmụnne ya ndị nwanyị abụọ, Elisabetta na Valentina, ji afọ 11 na 13 tọọ okenye ahụ.
Ka o sina dị, ya na Elisabetta nọrọ ọtụtụ ụbọchị ya, onye ghọrọ onye ya na ya na -agba egwu. Ọ bụ ezi enyi ya tụkwasịrị obi wee bụrụ nne ya nke abụọ. N'ezie, nwata nwoke ahụ tolitere n'ịhụnanya na ịhụnanya nke ukwuu.
Na 5, Leo etinyelarị onwe ya n'ịgba bọl. Naanị otu okwute si n'ụlọ ya guzoro ebe egwuregwu bọọlụ dị n'okpuru. Ọ na -agakarị n'ọhịa ka ọ mụọ naanị ya.
Lee oghere ebe o nwere mmalite dị umeala n'obi ya. Ọ si otú a na -eweghachite ncheta onye Itali.
Obi dị m ụtọ na nne na nna ya enweghị ihe mere ọ ga -eji gbochie ya ịchụso nrọ ya. Kama, ha gbara ya ume ka ọ nọgide na -arụsi ọrụ ike iji nweta ebumnuche ya otu ụbọchị.
Mmalite Ezinụlọ Leonardo Spinazzola:
A mụrụ aka ekpe na obodo nke na-enwetabeghị ndekọ nke imepụta ndị egwuregwu na-eme nke ọma. Ọ ghọrọ onye amaala Foligno nke pụtara maka ndị otu mba Italy.
N'ịmara nke ọma na obodo ya abụghị otu maka imepụta ndị na -eme egwuregwu, Leo rụrụ ọrụ okpukpu abụọ karịa nkezi onye na -eme egwuregwu. Ị maara?… Foligno bụ obodo ochie nke dị na mpaghara Perugia, Italy.
Maapụ ahụ na -egosi otu nkenke ozi gbasara Mmalite Ezinụlọ ya.
Ka m na -achịkọta akụkọ ndụ a, Spinazzola bụ naanị onye egwuregwu bọọlụ ama ama nke jikọtara agbụrụ ya na Foligno ugbu a.
Akụkọ gbasara ezinụlọ Leonardo Spinazzola:
Na ọ sitere na ezinụlọ na -akwado ma na -ahụ n'anya emeela njem njem ya nke ọma. Ma nne ya ma nna ya hụrụ n'anya n'ofe agbata obi ha maka ụdị obiọma ha.
Ọ bụ ekele maka ezinụlọ ya na Leo etolitewo bụrụ nwoke mara mma na onye na -eche banyere ya. N'ezie, ọ bara ọgaranya nke ukwuu mgbe ọ rụchara ọtụtụ ihe n'egwuregwu. Mana, Leo toro n'ezinụlọ nke na-eme nke ọma dị ka ezinụlọ ọ bụla nọ n'etiti.
Mmụta Leonardo Spinazzola:
N'agbanyeghị nrọ ya ịga nke ọma site na bọl, onye dribbler ka ga -aga ụlọ akwụkwọ. Dị ka nne na nna ọ bụla ọzọ, nne ya na nna ya chọrọ ka ọ nweta agụmakwụkwọ kwesịrị ekwesị.
Ha kwenyere na ọ chọrọ nhọrọ ọzọ ịlaghachi azụ ma ọ bụrụ na ịgba bọl anaghị arụ ọrụ. O doro anya na akpọtụbeghị aha ụlọ akwụkwọ Leo n'oge a na -achịkọta akụkọ ndụ a.
Akụkọ Leonardo Spinazzola Football:
Site na mmalite, ndị mmadụ maara na Leo abụghị nwata nkịtị. Na 5, ọ nọworị na -egosipụta ọkwa nraranye na ike nke karịrị ndị ọgbọ ya.
Spinazzola zụrụ ihe niile n'onwe ya ruo mgbe ọ sonyeere Virtus Foligno - klọb dị nso n'ụlọ ya - mgbe ọ kụrụ elekere 7. N'oge ahụ, ọ na -egwuri egwu na ọnọdụ mwakpo ma chọọ ị nweta akara na ụgwọ ọ bụla.
Foto na-adịghị ahụkebe nke ID ya ka ọ na-esonye na klọb egwuregwu mbụ ya.
Ọ mara oke mma na onye nkuzi ya ekwesighi ịkụziri ya ọtụtụ ihe gbasara nka maka afọ ndụ ya. Spinazzola lere anya elu Ronaldo de Lima, Del Piero na Rui Costa dị ka arụsị ya ma chọọ ịdị ka ha karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Leonardo Spinazzola Ndụ Ndụ Ndụ:
Oge ya na Virtus Foligno hụrụ ya ka ọ mepụtara ọtụtụ n'ime ikike ya na -enweghị atụ.
Mgbe ya na Virtus Foligno nọrọ afọ asatọ nke ndụ ya, onye ahụ dị afọ 8 sonyeere Siena na 14. Ọ bụ onye ama ama n'etiti ndị ọgbọ ya na ndị nkuzi ya ga-eme ka ya na ndị okenye lụọ ọgụ. Ọbụna na nke ahụ, ndị na -eme egwuregwu hụrụ talent Leo ngwa ngwa.
Afọ ole na ole mbụ nke ụbọchị ya na Siena siri ike. Nke a bụ nke mbụ ọ na -anọ ebe dị anya site n'ụlọ na naanị ya. Enwere oge ọ na -agụ agụụ ụlọ, ọ chọkwara ịkwụsị bọl wee laghachikwuru ezinụlọ ya.
Mana nne na nna ya (ọkachasị nne ya) na nwanne nna ya nọgidere na -agba ya ume ka ọ nọrọ ebe ahụ nwa oge. N'ezie, o mere ya, nsonaazụ ya wee bụrụ nke na -atọ ụtọ.
Leonardo Spinazzola Biography - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
Na 2010, onye mmeri na -eto eto sonyeere ntọala ndị ntorobịa nke Juventus na mbinye ego sitere na klọb nne na nna ya. Dị ka akara aka ga -enwe ya, o mechara binye aka na Old Lady (Juve) ihe dị ka afọ abụọ ka e mesịrị.
O bilitere wee bụrụ onye ama ama mgbe ọ sonyechara Juventus.
Mgbe ọ na -arụ ọrụ n'inweta mkpa na klọb ya, onye Italiantali na -ejekwara mba ya ozi n'ọtụtụ mba. Afọ ndị sochirinụ ọrụ ya hụrụ ya ka ọ na -aga ọtụtụ mgbazinye ego.
Ọ bụ otu n'ime oge ejighị n'aka nke ọrụ ya. N'ihi ịgbazinye ego ya, Spinazzola nwere oge siri ike imeghari na egwuregwu ahụ. Agbanyeghị, ọ rụsiri ọrụ ike iji gosipụta onwe ya dị ka onye na -eme egwuregwu egwuregwu.
Ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'akụkụ aka ekpe ya, n'agbanyeghị na ọ nwere ụkwụ aka nri. Moreso, Leo dịkwa mma n'ịgba egwu dị ka azụ, nku ma ọ bụ nku nku.
Leonardo Spinazzola Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
Ị maara?… Onye Italiantali si na ngosipụta nke Empoli gaa Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia na Atalanta, ha niile na mbinye ego. O mechara nweta nkwụsi ike dịka ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta afọ 4 ya na Rome ruru € 29.5 nde na July 2019.
Oge ya na klọb dị iche iche na mgbazinye ego siri ike. Agbanyeghị, Leo debere isi ya na ebumnuche nke ịga nke ọma n'ọrụ ya.
Nkwekọrịta ọhụrụ ya na Roma chepụtara mbufe Luca Pellegrini na Juventus n'ime otu oge ahụ. Site na klọb Italiantali ọhụrụ ya, Spinazzola meriri ọtụtụ otuto.
Onye Mbụ Site na Foligno iji yi National Team Jersey:
Mgbe Leo nwetara oku izizi mba ụwa mbụ na 2017, nna ya na nne ya ekweghị na ntị ha. Onye ọ bụla si n'obodo ya nwere oke mmasị maka akụkọ a.
Ọ bụ oge mbụ nwa afọ sitere na Foligno ga -anọchite anya obodo na egwuregwu mba ụwa. N'otu oge ahụ, ihe dị ka nrọ ghọrọ ihe mere eme ma nye ndị na -egwu egwuregwu n'obodo ahụ olileanya.
Ibili n'ọkwa nke ndị okenye nwetara ya ohere na Roberto Mancini's Euro 2020 team. Dị ka a tụrụ anya ya, Leo emeghị ka ndị na -eso ụzọ nwee nkụda mmụọ na arụmọrụ ya na asọmpi ahụ. O nyere ha abụọ Ciro Immobile na Federico Chiesa na -enyere aka n'oge dị iche iche.
Nke a nwetara ya nturu ugo 2 Man of the Match nke UEFA nyere n'asọmpi ahụ. N'ụzọ dị mwute, ọ hụrụ mgbatị akwara Achilles, nke wetara njedebe ya na egwuregwu ahụ.
Ọ bụ ụzọ na -egbu mgbu iji kwụsị asọmpi ahụ. Spinazzola enweghị ike ijide anya mmiri ya ka ọ ghara ịda mgbe ọ na -apụ na egwuregwu ahụ.
Tupu mmerụ ahụ, a kpọrọ Leo onye ọkpụkpọ kachasị ọsọ na asọmpi n'akụkụ Loic Nego mgbe ọ rutere ọsọ nke 33.8 km/h. N'ikpeazụ, ndị otu ya meriri asọmpi ahụ ọbụlagodi mgbe ọ na -anọghị ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọ joyụ ya enweghị njedebe ka ọ na -eme mmeri mmeri Italy na Euro 2020.
Nwunye Leonardo Spinazzola:
Mgbe ọ na-azụlite ọrụ ya, onye na-ekpe azụ achọghị ibi ndụ naanị ya. Ọ maara na ọ dị ya mkpa iwulite ndụ ịhụnanya ya ebe ezinụlọ ya nọ ya. N'ụzọ dị otú a, ọ gaghị adị ndụ naanị ya.
N'ihi ya, ọ gbasoro nzọụkwụ nke Marco Verratti wee malite ịlụ Miriam Sette - enyi nwanyị ya tụgharịrị bụrụ nwunye. Amụrụ ya na San Severo mana ọ nọghị ebe ahụ ogologo oge. Mgbe ọ na -etolite, ezinụlọ ya kwagara Foligno, ebe ọ zutere Leo, di ya n'ọdịnihu.
Ọnọdụ ikuku nke nri abalị ha jupụtara n'ịhụnanya dị ukwuu. Hụ ka di na nwunye si anụ ụtọ oge a.
Agbamakwụkwọ Leonardo Spinazzola:
N'oge mbedo ha dị ka enyi nwoke na enyi nwanyị, ndị di na nwunye nabatara nwa mbụ ha, Mattia, na 2018. Ha na -agbakọ bọọlụ ọnụ mgbe ọ bụla ha nọ naanị ha. Nwee obi ụtọ na vidiyo dị n'okpuru ma kpee onye nwere ezigbo nka n'etiti di na nwunye ahụ.
Leonardo na enyi nwanyị ya, Marian Sette, kekọtara eriri na Foligno n'ụbọchị nke iri abụọ na anọ nke ọnwa Disemba 24. Ememe obodo weere ọnọdụ n'ụdị mmekọrịta chiri anya na Halllọ Nzukọ Obodo nke obodo Umbrian ebe amụrụ ya.
Ọlụlụ Leonardo na nwunye ya mụrụ nwa ha nke abụọ, aha ya bụ Sofia. Ọ batara n'ụwa a na 2021.
Obere oge ya na nwunye ya na ụmụ ya nọ. Lee ọmarịcha ụzọ ọ ga -esi nọrọ ezumike ya.
Ndụ nke Leonardo Spinazzola:
Eziokwu ahụ na ọ nwere ike ịme akụkọ ihe mere eme site na ịbụ onye mbụ si n'obodo ya na -egwu maka Italytali na -eme ka ọ bụrụ onye tozuru oke maka horoscope ya. Ee, onye Spinazzola bụ ngwakọta nke agwa Zodiac Aries.
Ọ nwere ụdị obi ike na oke mmụọ nke na -enyere ya aka ime nnukwu ihe na -eme n'ọrụ ya.
Mgbe ọ na -anọghị n'egwuregwu ahụ, ọ ga -abụ na ọ ga -anọ na ọdọ mmiri na -ezute nwunye ya na nwa ya nwoke. N'ezie, omume ya emeela ka ndị fan jiri ya tụnyere onye obodo ya Jorginho.
Naanị ịmụmụ ọnụ ọchị ya na -egosi na ọ nwere agwa obi ụtọ. Leo nwere obi ụtọ isoro ndị ezinụlọ ya nọrịa.
Ndụ ndụ Leonardo Spinazzola:
Inwe ike isoro ezinụlọ ya biri n'ụlọ na -atọ ụtọ bụ otu n'ime ihe kacha mkpa. Dị ka Leonardo Bonucci, ọ bụghị onye na -akwado igosi ụgbọ ala ya na ụlọ obibi ya mara mma.
Kama, ọ na -ahọrọ idobe nkọwa gbasara akụ na ụba ya site na ntụpọ. Ka o sina dị, ụfọdụ foto ya na vidiyo ebugoro na Instagram emeela ka anyị hụperetụ ime ụlọ ya. Lelee vidiyo na -atọ ọchị n'okpuru wee hụ n'onwe gị.
Ezinụlọ Leonardo Spinazzola:
Enweghị ụzọ ọ ga -esi mee ya ugbu a n'egwuregwu bọọlụ na -enweghị nkwado nke ezinụlọ ya. N'ikwu eziokwu, Spinazzola nwetara ịhụnanya na agbamume dị ukwuu n'aka ezinụlọ ya dum.
Ọbụlagodi mgbe agụụ ụlọ na -agụ ya na ọ fọrọ nke nta ka ọ kwụsị ịgba bọọlụ, nne na nna ya na nwanne nna ya gbara ya ume ka ọ ghara ịda mbà na nrọ ya. Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị gbasara onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya.
Banyere Nna Leonardo Spinazzola:
N'agbanyeghị otuto dị ukwuu n'ụwa bọọlụ, nna Leo ka bụ onye amabeghị na akụkọ ndụ ya. Agbanyeghị, anyị ji n'aka na ya na nna ya nwere njikọ chiri anya.
Foto na -adịghị ahụkebe nke obere Leo na nna ya.
Dị ka a tụrụ anya ya, Spinazzola na -agbasokarị ntuziaka nna ya ma gbalịsie ike mee ka ọ dị mpako. N'ezie, ihe ndị ọ rụzuru etinyela ọbụna nna ya na ndị ezinụlọ ọzọ n'ọnọdụ nkwanye ùgwù n'obodo ha.
Banyere mama Leonardo Spinazzola:
Nne Leo (Simonetta) amaghị maka mkpa nrọ na ọchịchọ ya dị. Ọ maara na nwa ya nwoke nwere ikike ọ chọrọ iji mee nke ọma n'egwuregwu wee nye ya nkwado na -enweghị atụ.
Foto tụfuru ụbọchị nwata ya na nne ya, Simonetta.
Simonetta, ya na ụmụ ya nwanyị, na -eso Leo na -eto eto aga n'ọhịa mgbe ụfọdụ iji mee ya obi ụtọ n'oge egwuregwu ụfọdụ. Obiọma nne ya na ịhụnanya enweghị atụ bụ ihe kpatara na Spinazzola akwụsịghị ọrụ ya dị ka onye ọkpụkpọ.
Banyere ụmụnne Leonardo Spinazzola:
Dịka m kwuru na mbụ, nku nku azụ nwere ụmụnne nwanyị abụọ ndị okenye. Ụmụnne ya (Elisabetta na Valentina) jiri ịhụnanya na nkwanye ugwu mesoo ya. N'ịbụ onye tọrọ ya karịa afọ 11, ụmụnne nwanyị lekọtara Spinazzola dịka ọ bụ nwa ha nwoke.
Foto nke Leo na ụmụnne ya nwanyị abụọ. O doro anya na ha bụ mkpụrụ anya nne na nna ha.
Ka a sịkwa ihe mere o ji kpọọ Elisabetta, nne ya nke abụọ. N'ezie, mmekọrịta ha bụ nke enwere ike ịkọwa dị ka ụdị ọbụbụenyi na nwanne kachasị dị ọcha. N'oge ọ bụ nwata, Leo na ụmụnne ya nwanyị na -agbakarị egwu.
Banyere onye ikwu Leonardo Spinazzola:
N'ịgakwuru ndị ezinụlọ ya, onye na -eme egwuregwu na -esokwa nwanne nna ya Roberto enwe mmekọrịta chiri anya. Ọ dabara nke ọma, Roberto ghọtara ọtụtụ ihe gbasara bọọlụ ma na -ahụkarị na ọ kwadebere nwa nwanne ya ndụmọdụ dị mma n'oge ọ bụ nwata.
Ewezuga nna nna ya, enwebeghị ozi gbasara nna nna ma ọ bụ nne nne Spinazzola. N'otu aka ahụ, onwebeghị ihe ekwuru gbasara nwanne nna ya na ndị ikwu ya ndị ọzọ na Memoir ya.
Leonardo Spinazzola Eziokwu efu:
Mgbe ị gụchara akụkọ ndụ zuru oke nke azụ, nke a bụ ụfọdụ ihe ga-enyere gị aka ịghọta akụkọ ndụ ya nke ọma.
Nkwekọrịta Spinazzola na Roma na -enweta ya ụgwọ ọnwa nke € 100,000 kwa izu. Mgbe anyị nyochachara ego ọ na -akpata, anyị chọpụtara na onye na -eme egwuregwu nwere ọnụ ahịa ruru nde € 15.
Leonardo Spinazzola Roma Nkwụsị ụgwọ ọnwa -2021 na Euro (€)
Kwa Afọ: € 5,208,000
Ọnwa kwa: € 434,000
Kwa Izu: € 100,000
Kwa :bọchị: € 14,286
Kwa elekere: € 595
Nkeji nkeji: € 9.9
Kwa Nke Abụọ: € 0.17
Na -ekpe ikpe site na ụgwọ ọnwa ya, nkezi nwa amaala Italiantali ga -arụ ọrụ ruo afọ 3 iji nweta ihe Spinazzola na -enweta n'ime otu izu. Anyị ejirila nlezianya gbakọọ ego ọ na -enweta ka elekere na -aga. Hụ ego ole o mere kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Leonardo Spinazzola's Bio, nke a bụ ihe o nwetara.
Eziokwu nke abụọ: Leonardo Spinazzola Tattoos:
A hapụghị onye ọkaibe nwere nkà n'ime ndị otu egwuregwu ya banyela n'ime ụwa igbu egbugbu. Dị ka Nicolo Barella, ọ tinyela egbugbu n'aka ya.
Ọbụlagodi mgbe ọ na-eyiri uwe elu aka ya dị mkpụmkpụ, a ka na-egosi ndị na-ekiri ya egbugbu ya n'ụdị mara mma. Lelee onyonyo nke egbugbu ya na foto dị n'okpuru.
Ọ nweghị ụzọ ọ ga -esi zoo egbugbu ya. A na -egosipụta ha mgbe niile n'ụdị mara mma maka ndị na -amasị ya.
Eziokwu nke 3: Leonardo Spinazzola Religion:
Na -ekpe ikpe site n'aha mbụ ya, anyị na -eche na onye na -eme egwuregwu ahụ nwere ike bụrụ Onye Kraịst. Moreso, obodo ya nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke kwenyere na Jizọs Kraịst. N'ihi ya, Spinazzola nwere ike ịbụ n'etiti 85.6% nke ndị na -eme Okpukpe Ndị Kraịst.
Site na mmalite nke ọrụ ya, Leo abụwo onye ọkpụkpọ nwere nkà. Ọbụlagodi ka m na -achịkọta akụkọ ndụ a, FIFA Stats ya ka na -ekwu maka eziokwu na o nwere ụfọdụ ọpụrụiche.
Ndị egwuregwu FIFA Stats.
Dika nyocha nke ike ya, Spinazzola enwetala ike nchekwa na mwakpo. Ọ bụ otu onye egwu ịchọrọ na otu gị mgbe ị na -egwu egwuregwu vidiyo.
Tebụl dị n'okpuru na -egosi ozi gbasara Leonardo Spinazzola. Ọ na -enyere gị aka ịgụ akụkọ ndụ ya ngwa ngwa o kwere mee.
Aha n'uju: Leonardo Spinazzola
aha otutu: Leo
Ụbọchị ọmụmụ: Ụbọchị 25th nke March 1993
Ebe amụrụ onye: Foligno, .tali
Ụmụnne: Elisabetta na Valentina
Nwunye: Miriam Sette
Children: Mattia (nwa nwoke) na Sofia (nwa nwanyị)
Ezigbo Net: Million 15 million (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: 5,208,000 (Ọnụọgụ 2021)
elu: 1.86 m (6 ụkwụ 1 na)
Talent naanị anaghị akọwapụta ihe ịga nke ọma nke ndị egwuregwu bọọlụ. Dịka anyị hụgoro na Spinazzola's Biography, ọ were ụbọchị ọzụzụ onwe ya iji zụlite ikike ya. N'ihi àjà ya, ọ dọtara mmasị nke klọb ndị England kacha elu dị ka Chelsea.
Ọ dị anyị mkpa ịja nna ya na nne ya mma maka nkwado ha na mmepe ọrụ ya. Ọzọkwa, anyị na -aja ụmụnne ya ndị nwanyị na nwanne nna ya mma, ndị bụ ọtụmọkpọ maka inyere ya aka ịgbanahụ mbọ owu ọmụma.
N'ikpeazụ, ezinụlọ ya niile ghọrọ ndị nyere aka na nkwalite ya ka ọ bụrụ onye ama ama. N'ezie, Leo agaghị echefu ịhụnanya na nkwado ha. Daalụ maka ịrapara na njedebe nke akụkọ ndụ anyị na -etinye aka na Itali. Anyị nwere olileanya na ọ masịrị gị.